ယူနိက်တက် ဆန်ချိုကို ခေါ်ခဲ့တာ အမှားတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီလား? – FBV SPORT NEWS
ဆန်ချိုကို ခေါ်ခဲ့တာ အမှားတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီလား?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဆန်ချိုကို ခေါ်ခဲ့တာအမှားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလားဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေကို ခုရက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသတင်းမီဒီယာတွေက ဆောင်းပါးအဖြစ်ရေးသားနေတာတွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကရေးသားထားကတော့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ဆန်ချိုကို ပေါင် ၇၃သန်းထိ ဈေးကြီးပေးပြီး အလျင်တစောဝယ်ခဲ့တာဟာ လက်ရှိတက်နေတဲ့ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်စေအောင်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ယူနိက်တက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆန်ချိုကိုပေါင် ၇၃သန်းတန်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် ယူနိက်တက်မှာဆန်ချိဟာ တစ်ကယ်ရောလိုအပ်သေးရဲ့လားဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်?
ဆန်ချိုဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားဆိုတာမှန်ပေမယ့် ယူနိက်တက်ရဲ့လက်ရှိလိုအပ်ချက်က တောင်ပံတိုက်စစ်မဟုတ်ပဲကွင်းလယ်ပိုင်းက အရေးကြီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေးလီးမေးလ်မှာရေးသားထားပါတယ်။
လက်ရှိယူနိက်တက်မှာ ပြီးခဲ့တစ်ရာသီလုံးခြေစွမ်းပြနေခဲ့တဲ့ ဂရင်းဝုဒ်၊ ရက်စ်ဖို့၊ မာရှယ် ၊ အာမက်၊ ဒန်ဂျိန်းစတဲ့ကစားသမားများစွာရှိနေတာဖြစ်ပြီး အထောင်တိုက်စစ်မှာဆိုလည်း ကာဗာနီရှိနေပါတယ်။
အားကစားသုံးသပ်သူတွေကတော့ ဆန်ချိုရောက်လာတာဟာ ယူနိက်တက်ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်းထက်မြက်နေတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရုန်းကန်ရင်း အရံခုံရောက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
လက်ရှိဆန်ချိကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့အတွက် မာရှယ်ကတော့ ကျိန်းသေပေါက် အဌားနဲ့ရောင်းချမှုတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ပေါ့ဘာရဲ့မသေချာမှုကြောင့် ကွက်လပ်အကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။ ဒါကို ဘယ်လိုပြန်ကုစားကြဖို့ ယူနိက်တက်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးနေပါပြီ။
ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီးလက်ရှိBournemouth Head Coach ဖြစ်တဲ့ Parkerကတော့ ယူနိုက်တက်ကို ခုလိုဝေဖန်သွားပါတယ်။” ယူနိုက်တက်အတွက် တစ်ကယ့်ကို လိုနေတာက ကွင်းလယ်ပိုင်းဗျ။ သူတို့ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ လောက်လောက်လားလားလက်ညှိုးထိုးပြစရာကစားသမားကင်းမဲနေတယ်။ အခုအခြေအနေဆိုပိုတောင်လိုသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ နံပါတ် ၁ ပစ်မှတ်က ကွင်းလယ်ဖြစ်ရမှာ”လို့ Parkerကဆိုပါတယ်
” သူတို့လိုနေတာ ဒီကလန်ရိုက်လိုကစားသမားမျိုး။ အကုန်သုံးနိုင်တဲ့ကစားသမား။ အဲ့ဒီကစားသမားမျိုးကို နံပါတ်တစ်ပစ်မှတ်ထားရမှာ။ ခုတော့ မလိုပဲ ငွေဖြုန်းသလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့။ သူ့ကိုသုံးမယ့်ငွေကို ရိုက်အတွက်သုံးသင့်တာ”လို့သူကDaily Expressကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိက်တက်ရဲ့ လိဂျန့်တစ်ချို့ကလည်းဆန်ချိုကို ခေါ်ယူခဲ့တာဟာ ယူနိက်တက်က တက်သစ်စ ကစားသမားကြယ်ပွင်တွေကို ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ကွင်းလယ်က ပေါ့ဘာပြသာနာကြောင့် ယူနိက်တက်တို့ခေါင်းကိုက်နေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်အပြင် နောက်ခံလူလည်းဝယ်ရဦးမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက် ယူနိက်တက်တို့ဟာ ဂလေဇာချပေးတဲ့ သန်း၁၅၀လောက်နဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊
လောလောဆယ်မှာတော့ ယူနိက်တက်ဟာ ရိုက်ရဲ့ဈေးကြောင့် ရိုက်ကိုတော့စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်ပြီး အသက်၁၈နစ်အရွယ် ပြင်သစ်ကလပ်ရိန်းမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားကာမာဗင်ဂါကိုတော့ ယူရို ၂၅သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက် လက်ရှိယူနိက်တက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာတော့အရေးကြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ရီးရဲလ်နောက်ခံလူ ဗားရန်းက ပေါင်သန်း၄၀ကိုပယ်ချထားပြီး ၆၀လောက်လိုချင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့် ဆန်ချိုကြောင့်ငွေကုန်ထားတဲ့ ယူနိက်တက်တို့ ကွင်းလယ်နဲ့နောက်တန်း အဆင့်ရှိရှိကစားသမားကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဖန်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ ဆန်ချိဟာ ယူနိက်တက်အတွက်တစ်ကယ်ရောလိုနေရဲ့လား။